Dagaal culus oo maanta ka qarxay magaalada Jowhar - Caasimada Online
Home Warar Dagaal culus oo maanta ka qarxay magaalada Jowhar
Dagaal culus oo maanta ka qarxay magaalada Jowhar
Jowhar (Caasimada Online) – Wararka laga helayo caasimada dowlad goboleedka HirShabelle ee Jowhar ayaa ku warramaya in goor dhow dagaal culus uu ka qarxay banaanka magaaladaasi, kaas oo la’isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay inuu dagaalkan u dhexeeyo ciidamada dowladda, kuwa HirShabelle oo dhinac iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda magac-baxday Macawisley ee ka dagaalanta deegaano hoostaga maamulkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda Macawiisley ay saacadihii lasoo dhaafay buux dhaafiyeen deegaano dhaca duleedka magaalada Jowhar, kuwaas oo ka yimid dhinaca xiga degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Booliiska maamulka HirShabelle iyaguna ay bilaabeen inay ka hortagaan dhaq-dhaqaaqa ay wado kooxdaasi, waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka u dhexeeya labada dhinac.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, waxaana dadka deegaanka ay cabsi xoogleh ka muujinayaan inuu saameyn ballaaran ku yeesho dagaalkaasi, maadaama lagu kor dirirayo.
Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxaya saraakiisha ciidamada dowladda iyo HirShabelle oo ku aadan dagaalka ka socda magaalada Jowhar oo xarun u ah gobolka Sh/ Dhexe.